Igbo, John: Lesson 125 - Nkọwa nke ozioma Jọn (Jọn 20:30-31) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 125 (Conclusion of John's gospel)
4. Nkọwa nke ozioma Jọn (Jọn 20:30-31)
Ya mere Jisus mere ọtutu ihe-iriba-ama ọzọ n'iru ndi nēso uzọ-Ya, ndi edeworo n'akwukwọ a; Ma ndia ka edeworo n'akwukwọ, ka unu we kwere na Jizos bu Kraist ahu, Ọkpara Chineke, na ikwere na unu gēnwe ndu n'aha-Ya.
Na njedebe nke isi nke a, anyị ruru ikpeazụ nke ihe Jọn n'onwe ya dere. Onye na-ede akwụkwọ na onye nkwusa ozioma na-ekwuputa na ìhè nke ìhè Chineke na-apụta n'ọchịchịrị nke na-aghọtaghị ya. Ma nye ndi nile natara ya, o nyere ikike nke ibu umu Chineke, ndi kwere na ya. Onye nkwusa ozioma ahu mere ka ayi baa omimi nke nmekorita Chineke na onye nke Jizos. Ọ na-egosi anyị ọnwụ na nbilite nke Kraịst, ka anyị wee nwee ike ikwere na ya ma hụ ya na anyị bi.Na nchikota, onyeozi ahụ na-enye iwu anọ, iji mee ka anyị ghọta ọdịiche nke ozioma ya na ebumnuche nke ederede ya.
Jọn edeghị akwụkwọ iji kwupụta okwu niile na omume Jizọs. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-abụrịrị na ọ na-ede ọtụtụ tomes. Ọ họọrọ ihe ịrịba ama ndị ahụ na okwu ndị ga-eme ka àgwà Jizọs na-enweghị atụ pụta ìhè. Ihe odide ya abughi ihe nke Mo Nso nke Chineke na nhuta ma obu na odigh nma. Kama nke ahụ, ọ bụ ya, dịka mmụọ nsọ si n'ike mmụọ nsọ, ịhọrọ ihe ndị a ma ama, ọ na-egosipụtakwa Nwa Atụrụ Chineke nke na-ewepụ mmehie nke ụwa, onye e gburu egbu.
Jon dere ozi ọma a maka anyị ịghọta na nwoke ahụ bụ Jizọs onye Nazaret, nke dị jụụ na onye a na-eleda anya, bụ Kraịst, Onye ahụ kwere nkwa na Ọkpara Chineke n'otu oge ahụ. Site na utu aha abuo a, o choro otutu ndi Ju n'oge agba ochie. Ya mere, o kpebiri mba ya nke kpogidere nwa Devid kwere ná nkwa. Nwoke ahụ Jizọs kwadoro ezi Kraịst dịka Ọkpara Chineke. Ezi ebere nke Chineke na nke zuru oke abughi ihe ojoo, ma obu ileghara onye obula anya oma. Jọn na-eto Jizọs n'ụzọ dị ebube. Ihe oyiyi Jizos nye ayi abugh ihe obula, ka ayi we mara ihu oma nke Okpara Chineke, onye mere madu ka ayi we buru umu nke Chineke.
Jọn achọghị ka ọ bụrụ na anyị nabatara nkwenye n'ụkpụrụ anyị, ma anyị na Ọkpara Chineke nwere mmekọrịta. Ebe Jizọs bụ Ọkpara, Chineke na-aghọ Nna anyị. Ebe ọ bụ na Onye dị elu bụ Nna anyị, ọ nwere ike mụta ọtụtụ ụmụ, jupụta na ndụ ebighi ebi ya. Nmuru ohuru site na obara nke Kraist na Mo nime ayi, nke ahu bu ihe mgbaru ozioma nke Jon. Ya mere, a mụrụ gị na mmụọ, ma ọ bụ na ị ka na-anwụ anwụ na mmehie? Ndụ Chineke bi nime gị, ma ọ bụ na Mmụọ Nsọ Ya adịghị gị?
A mụrụ nwa nke abụọ site na okwukwe na Ọkpara Chineke. Onye na-atụkwasị ya obi na-enweta ndụ Chineke. Anyị nwere ndụ a na mmekọrịta ya na ya site na okwukwe. Onye na-anọdụ n'ime Jizọs ga-achọpụta na Jizọs na-anọgide na ya. Onye kwere ekwe a ga - eto nime mmuo na eziokwu, nkpuru nke ndu Chineke ga - etokwa n'ime ya. Ndụ ebighi ebi bụ ịhụnanya Chineke na-eme ka anyị mee ka ọtụtụ ndị nwee okwukwe na Jizọs, ka ha hụ ya n'anya ma nọgide na ya na ya na ha mgbe niile.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka ozioma dị ka onye nkwusa ozioma John dere. Site n'akwụkwọ a pụrụ iche anyị na-ahụ ebube gị na eziokwu gị. Anyị ji obi ụtọ kpọọ isiala nye gị, n'ihi na i dugaara anyị ka anyị nwee okwukwe na gị, ma jiri amara nweta anyị ọzọ. Debe anyị na mmekọrịta gị, ịhụ gị n'anya na idebe iwu gị. Ka anyị gbaa àmà n'ihu ọha na aha gị, na ndị enyi anyị pụrụ ịtụkwasị gị obi ma nweta ndụ bara ụba site n'okwukwe.
Gịnị ka Jọn kọwakwuru ná ngwụsị nke ozi ọma ya?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)